"တစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်"...... - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
Tim Cook ရဲ့ စကားသံမဆုံးခင်မှာ လက်ခုပ်သံများ ဆူညံသွားခဲ့တယ်။ အားလုံးဟာ အဆန်းသစ်ဆုံး အရာတစ်ခုကို မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း ရတော့မယ်ဆိုတာ သိနေတဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ စတိတ်စင်ပေါ်က Tim Cook ဆီ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်...။
Hello to the future...
iPhone X ရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းဟာ အနာဂါတ် စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုကို နူတ်ဆက် ဆီးကြိုလိုက်ပါတော့တယ်။
Edge-to-edge Screen အမျိုးအစားဖြစ်သွားပြီး ဖုန်းရဲ့အရှေ့အနောက်တွေကို Glass တွေ သုံးထားတယ်။ သပ်ရပ်တဲ့ ဘေးဘောင်တွေကလည်း Surgical Grade Stainless Steel နဲ့ တည်ဆောက်ပေးထားတယ်။
Super Retina Display....
Display ကတော့ OLED အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ Super Retina Display လို့ အမည်ပေးထားတယ်။ Display အရွယ်အစားကတော့ ၅.၈ အရွယ်အစားဖြစ်ပြီး Screen Resolution 2436×1125 နဲ့ 458 ppi ပါ။
2K Display အမျိုးအစားမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရုပ်ထွက်ကာလာရနိုင်ဖို့ Dobly Vision နဲ့ HDR10 ကို ထောက်ပံပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာ iPhone တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးနည်းပညာများကို အသုံးပြုထားတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
Home Buttom ပျောက်လို့ ရှာမနေပါနဲ့.....
iPhone X ဟာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များအတိုင်း Home Buttom ပါမလာတော့ပါဘူး။ နောက်ဆိုရင် iPhone ပြတိုက်မှာ သွားကြည့်ရမယ့် အခြေအနေကိုတောင် ရောက်လာနိုင်တယ်...?
Screen အပြည့် Display ဖြစ်သွားတာကြောင့် Home Buttom ပါမလာတော့ပါဘူး။ Home Buttom ပါမလာတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် Touch ID လည်း ပါမလာတော့ပါဘူး။
Swipe Gesture Function ကြောင့် Home ကို လွမ်းရင် အရင် iPhone တွေ ပြန်ကြည့်နော်... ? Swipe လလုပ်မှ Home Screen ကို ပြန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွဲတင်ဆွဲချ လုပ်နိုင်တဲ့ အြခေအနေကြောင့် သိပ်မကြာခင် H.B ကြီးကို မေ့သွားမှာပါလေ...?
ရုပ်ချောသူတွေ ပိုသုံးကြမယ့် Face ID ? ......
ခန့်မှန်းသတင်းတွေက မှန်ပါတယ်။ Face ID ကို အသုံးပြုပြီး ဖုန်း Lock အဖွင့်အပိတ် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Lluminator စနစ် ပါဝင်တာကြောင့် အမှောင်ထဲမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Face ID Sensor အသစ်ဟာ သုံးစွဲ သူတွေရဲ့ မျက်နှာကို အလွယ်တကူမှတ်သားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။Security ပိုင်းကတော့ လူအယောက် ၁ သန်းမှာ ၁ ယောက်ပဲ တူနိုင်ပါတယ်တဲ့ဗျာ။ Touch ID ကတော့ လူအယောက် ၅ သောင်း မှာ ၁ ယောက် တူနိုင်တယ်ဆိုတော့ Face ID က ပိုပြီး Safe ဖြစ်တယ်ဗျ..။
Face ID က Unlock အတွက်တင်မဟုတ်ဘဲ Apply Pay တွေအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Face ID ဟာ အမွှာတွေကိုတောင် မှားစရာ မရှိပါဘူးတဲ့ဗျာ။ မေးစရာလေးရှိမှာက အရွယ်ကြီးလာရင်ရော FID က မှတ်သားနိုင်အုံးမလားဆိုတာပါပဲ...?
Face ID နဲ့ တွဲ ဖက်လုပ်ဆောင်ဖို့ A11 Bionic Chip ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ Chip မှာ ပါဝင်တဲ့ Neural Engine နည်းပညာက နေ့စဉ်မျက်နှာအသွင်အပြင်အပြောင်းအလဲတွေကို မှတ်သားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုတိကျတဲ့ Face ID ကို iPhone X မှာပဲ ရနိုင်မှာပါ..?
အခုတော့ emoji လေးပဲ သုံးပါရစေနော် ? ဒါက iPhone X မှာပဲ ရနိုင်လို့ ?
ဖုန်းရဲ့ အရှေ့ ဘက်မှာ ပါဝင်တဲ့ True Depth camera ကြောင့် Animoji အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းပညာကတော့ မျက်နှာပေါ်က မတူညီတဲ့ Muscle ၅၀ ရဲ့ လုပ်ရှားမှုတွေကို အခြေခံပြီး မျက်နှာရဲ့ ဟန်ပန်အမူအရာအတိုင်း သက်ဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ emoji လေးတွေကို သင့်ရဲ့အသံနဲ့ ဖော်ပြပေးသွားမှာဆိုတော့ ? အခုတော့ ဒီ emoji လေးပဲ ပေးပါရစေဗျာ....
ဆက်လက်ပြီး ကျန်ရှိတဲ့ အချက်များကိုလည်း ရေးသားတင်ပြပေးသွားမှာမို့ စောင့်မျှော် ဖတ်ရှု စေချင်ပါတယ်နော်...?
More in this category: « “Dual Camera နဲ့ ထွက် ရှိလာပြီ ဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy Note 8” iPhone 8 Plus & 8 Specifications preview »